“အတွေးစလေးတွေ”: October 2010
Posted by Han Kyi at 1:42:00 pm No comments:
ကိုယ်တို့ခပ်ငယ်ငယ်က အထက်တန်းအဆင့် စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာမှာ သင်တဲ့ပြဌာန်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးရိုးမြန်မာကဗျာဖွဲ့ထုံးတွေကို အခြေခံကစလို့ ကျကျနနရှင်းပြထားလို့ တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမေဘက်က အဒေါ်တစ်ယောက်က အထက်တန်းကျောင်းသူဘ၀က စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ အတွဲကိုယူခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဆီက ဒီကဗျာဖွဲ့နည်းစာအုပ်ကို စာဖတ်တတ်ကာစ လက်တည့်စမ်းချင်နေတဲ့လေးတန်းကျောင်းသားအရွယ် ကိုယ်ကဖတ်မိတာနဲ့ ကဗျာတွေတောင်ရေး၊ မြောက်ရေးရေးရင်း အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်လောက်မှာ ဒီကဗျာဖွဲ့ထုံးအားလုံးနည်းပါးနဲ့ ယဉ်ပါးသွားပါတော့တယ်။ ခပ်ငယ်ငယ်ကတည်းက ကဗျာအခြေခံသဘောကို နားလည်သွားခဲ့တော့ အသက်ရလာလို့ ကဗျာကောင်းကောင်းရေးနိုင်တဲ့ အရွယ်ရောက်လာတော့ ကဗျာရေးရတာ အခက်အခဲမရှိတော့သလို ရေးလို့လည်း ကောင်းလာပါတယ်။ အတွေးနောက်ကို ကာရန်ပါလာပါတော့တယ်။
အဲဒီစာအုပ်က ကိုယ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်မှာ အသိမ်းလွန်ရာကနေ ပျောက်သွားလိုက်တာ ဘယ်မှာမှရှာလို့မရတဲ့အပြင် ပြန်ရှာဝယ်တော့လည်း မရတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်နဲ့ စေတနာနဲ့ဝေငှပေးတဲ့ စာချစ်သူတွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် မြန်မာစာအုပ်ဆိုက်တစ်ခုကနေ ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ရထားတဲ့စာအုပ်ကို စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးတဲ့အခြားသော ပရိသတ်တွေ ဖတ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ပေါ်မှာ ပြန်တင်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတာတော်တော်ကြာနေပါပြီ။ မတင်တတ်တာကြောင့် တောင်မေး၊ မြောက်မေးနဲ့ နှစ်လကျော်လောက် စမ်းတ၀ါးဝါးဖြစ်နေရာကနေ
KP3 ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် အခုတော့ တင်လို့ရသွားပါပြီ။
( KP3 ဆထက်ထမ်းပိုး အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်)
မော်ဒန်ကဗျာ၊ လွတ်လပ်ကာရံ၊ ပို့စ်မော်ဒန် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြိုက်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကဗျာဖွဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ ကဗျာဖွဲ့ထုံးပေါင်းများစွာကို ကျေကျေညက်ညက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ရှေးရိုးကို ရိုးအီသွားတာကြောင့် လမ်းရိုးဟောင်းမှာ လမ်းသစ်ထွင်တာကို အားပေးပါတယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်လည်းဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းရိုးကို မမြင်ဖူးဘဲ လမ်းသစ်ထွင်နေတာတော့ သဘာဝသိပ်မကျပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်ကလေးတွေအနေနဲ့ ရှေးရိုးကဗျာဖွဲ့နည်းကို ကျကျနနသိအောင်လုပ်ဖို့ အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကဗျာဖွဲ့နည်းသင်တန်းဆိုတာမျိုးလည်း မရှိတဲ့အပြင် ကဗျာဖွဲ့နည်းစာအုပ်လည်း မရှိတာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် ကဗျာကို မြတ်နိုးသူတွေအတွက် ပြန်ဝေငှလိုက်ပါတယ်။
Posted by Han Kyi at 11:28:00 am3comments:
မနက်၅နာရီခွဲလောက်ကစလို့ အိမ်ကထွက်သွားကြရတာ ညဘက်၈နာရီလောက်မှပဲ အိမ်ပြန်ရောက်ကြပါတော့တယ်။ ပုံမှန်ကျောင်းတွေမှာ မနက်၉နာရီကစကျောင်းတက်လ်ို့ ညနေ၃နာရီခွဲမှ ကျောင်းလွှတ်တာဖြစ်ပြီး ကြားထဲမှာထမင်းစားချိန် တစ်နာရီပဲနားပေးတာကြောင့် စုစုပေါင်းစာသင်ချိန်၆နာရီရှိပါတယ်။ ဒီစာသင်ချိန်ကတော့ မနည်းလွန်း၊ မများလွန်းပါ။ ကျောင်းသားတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကတော့ မနက်၈နာရီကစလို့ ကျောင်းတက်ရပါတယ်။ စနေနေ့တွေမှာလည်း ကျောင်းမပိတ်ပါ။ အခုလိုသီတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက်မှာတောင် တစ်တိုင်းပြည်လုံးကကျောင်းတွေပိတ်ပေမယ့် သူတို့ကျောင်းကတော့ လပြည့်နေ့နဲ့ လပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့ စုစုပေါင်းနှစ်ရက်ပဲကျောင်းပိတ်ပေးပြီး ကျန်ရက်တွေမှာ ပုံမှန်စာသင်ချိန်အတိုင်းသင်ပါတယ်။ များများသင်ရင် များများတတ်မယ်လို့ ယူဆထားကြဟန်တူပါရဲ့။
ဒီကြားထဲမှာ ကျောင်းသားအများစုက ကျောင်းစာတစ်ခုထဲနဲ့ အားမရကြတာမို့ ကျူရှင်ယူကြရပါတယ်။ ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်ကလည်း ကျူရှင်ယူခဲ့တာပါပဲ။ ဆေးကျောင်းသားဘ၀မှာလည်း ကျူရှင်နဲ့မကင်းလွတ်ခဲ့ပါ။ သင်ကြားမှုညံ့ရင် ထမင်းအိုးပျောက်တတ်တဲ့ သဘာဝရှိတာကြောင့် ကျူရှင်ဆရာတွေဟာ ပုံသေလစာကတော့ အမြဲရနေမှာဖြစ်တဲ့ ၀န်ထမ်းဆရာ၊ ဆရာမတွေထက် ပိုကြိုးစားကြတာ ထုံးစံပါ။ ဒါတင်မက ကျူရှင်ဆရာဆီကိုလာတက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများက တကယ်အားကိုးလို့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းကဆရာ၊ ဆရာမဆီမှာကျတော့ အားကိုးတယ်၊ မကိုးဘူးစဉ်းစားလို့မရဘဲ သူသင်ပေးတာကို တာဝန်အရ လက်ခံရတာပါ။ ဒါ့အပြင် ကျူရှင်ဆရာဆိုတာ သူ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကို ထိန်းသိမ်းဖို့ သူ့ကိုယ်သူပဲ အားကိုးရပါတယ်။ ကျောင်းပျက်တဲ့ကျောင်းသား၊ စာမကြိုးစားတဲ့ကျောင်းသား၊ စဉ်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်း သူ့ဖာသာအဆင်ပြေအောင် ထိန်းသိမ်းယူရပါတယ်။ အဲဒီလိုကျောင်းသားမျိုးကို ကျူရှင်ကနေထုတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်လို့လဲမရနိုင်ပါ။ ဒီကျူရှင်က ထုတ်လိုက်ရင် တခြားကျူရှင်မှာ ရင်ကော့ပြီးသွားတက်လို့ရတဲ့ မောင်ကျောင်းသားက အဲဒီလိုစကားလုံးမျိုးကို ရင်တောင်ခုန်မှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အထက်တန်းကျောင်းမှာတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေဟာ ကျောင်းသားထိန်းသ်ိမ်းရတာ သက်သာပါတယ်။ ပြောမရ၊ ဆိုမရရင် ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်းကိုပဲ ပို့မလား၊ မိဘခေါ်ပြီး ပြန်အပ်ရမလား နည်းမျိုးစုံနဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်လည်း လုပ်နေကြပါတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ ကျူရှင်ဆရာတွေဟာ ကျောင်းသားထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအပိုင်းမှာ ၀န်ထမ်းဆရာတွေထက် ပိုပြီးကျွမ်းကျင်လာကြခြင်းပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အဓိကပြောချင်တာက ကျောင်းတွေကရော၊ ကျူရှင်တွေကပါ စာသင်ချိန်တွေ သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင်ယူပြီး တွန်းသင်နေကြတာကိုပါ။ ကျောင်းသားဟာ မနက်၆နာရီထိုးရင် ကျူရှင်ရောက်နေပါပြီ။ ညနေကျောင်းဆင်း ၃နာရီခွဲတာနဲ့ ကျူရှင်သွားလိုက်တာ ၆နာရီလောက်မှ ပြန်ရပါတယ်။ ညတန်းပါ ယူကြတဲ့ကျောင်းသားများကတော့ အိမ်မှာနာရီဝက်လောက် နားပြီးရင် ၆နာရီခွဲလောက်ကစလို့ ည၁၁နာရီကျော်လောက်ထိ ကျူရှင်မှာပြန်ဝင်ပြီး အဲဒီမှာပဲ အိပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီကလေးတွေဟာ မနက်ဆိုရင်လည်း ၄နာရီခွဲထပြီး စာသင်ကြရပါတယ်။ ဒီတော့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်ချိန်ဟာ ၅နာရီသာသာပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ကျူရှင်မှာ အိပ်ရေးမ၀ကြတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာ အထက်တန်းကျောင်းမှာ သွားပြီးတော့ ငိုက်ကြပါတော့တယ်။ အဲဒီလောက် မနားမနေစာသင်နေကြရတဲ့ ဘယ်ကျောင်းသားမှ ခေါင်းထဲမှာ စာဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါ။ သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ ကွန်ပျုတာတောင် ဆက်တိုက်ခိုင်းရင် စက်ပူပြီးလုပ်အားနှုန်း ကျသွားလေ့ရှိတာပါ။ ဒီတော့ တပင်တပန်းနဲ့ မနားမနေစာသင်နေကြရတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လုပ်အားနှုန်းကျဆင်းရတာ မထူးဆန်းတော့ပါ။
ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ဆရာကောင်းကောင်းက ဘယ်လောက်ပဲသင်သင် သူ့ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်မရှိရင် ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပါ။ စာဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကြည့်မှရတာပါ။ ဆရာလုပ်သူက နည်းပေးလမ်းပြရုံ၊ ကြပ်မတ်ရုံပဲ လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ ငါဟဲ့ဝါရင့်ဆရာဆိုတဲ့ မာနကြီးတစ်ခွဲသား လက်ကိုင်ထားလို့ အတင်းဖိသင်နေပြီး ကလေးတွေကို ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်နဲ့ နားချိန်ပေးမထားရင် ကျောင်းသားရော၊ ဆရာပါ လုံးပါးပါးပြီး နစ်နာပါလိမ့်မယ်။ ပင်ပန်းလွန်းပြီး ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းတဲ့ ဘယ်အရာကိုမှ လူတွေစိတ်ဝင်စားလေ့မရှိတာ သဘာဝပါ။ ဒီလိုပါပဲ ကျောင်းသားတွေမှာလည်း ပင်ပန်းလွန်းအားကြီးရင် စာကိုအာရုံဝင်စားကြတော့မှာ မဟုတ်ပါ။ စာဘက်မှာ အားနည်းသွားရုံသာမက ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ၊ အထွေထွေဗဟုသုတရေးရာတွေမှာ အချိန်မပေးနိုင်တော့တာကြောင့် ဘက်စုံထောင့်စုံက အရှုံးကြီးရှုံးကုန်ကြပြီး အစစအရာရာ ကျဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
စာသင်ချိန်တစ်ချိန်ဆိုတာ ကျောင်းသားတွေအတွက်ရော၊ ဆရာတွေအတွက်ပါ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဆရာရော၊ ကျောင်းသားတွေပါ အချိန်ရော၊ လုပ်အားပါ ပေးကြရတာပါ။ သိသာထင်ရှားအောင်ပြောရရင် အားလုံးရဲ့ဘ၀ရော လုပ်အားပါပေးထားရတာပါ။ အဲဒီလောက် အရင်းအနှီးကြီးကြီးပေးပြီး လုပ်ထားရတဲ့ စာသင်ချိန်တစ်ချိန်အပြီး ကျောင်းသားရဲ့ခေါင်းထဲမှာ စာတစ်လုံးမှ ၀င်မသွားခဲ့ဘူးဆိုရင် အားလုံးရှုံးသွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် စာသင်ချိန် နည်းတယ်၊ များတယ်ဆိုတာထက် တစ်ချိန်ချင်းစီမှာ အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးကြမလဲ ဆိုတာကိုပဲ ပိုပြီးအလေးထားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့လက်ခံကျင့်သုံးနေကြတဲ့ Student centered education ကျောင်းသား ဗဟိုပြုသင်ကြားရေးစံနစ်မှာ ပေးသူဖြစ်တဲ့ ဆရာတွေထက်၊ လက်ခံသူတွေဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ပိုကြိုးစားရပါမယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံထက် သူတို့နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ပုံစံမျိုးကို ဦးစားပေးပြီး ရွေးချယ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း တိုးတက်မှု ရှိပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ ကိုယ်တို့မြန်မာကျောင်းသားတွေလောက် တပင်တပန်းပညာသင်ယူကြတာ ဘယ်မှာမှမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အစစအရာရာမှာ နိုင်ငံတကာကို မမီနိုင်သေးပါ။ သင်သလောက်သာ တတ်ကြမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ်တို့ကျောင်းသားတွေ ထိပ်တန်းကတောင် ဆင်းမယ်မထင်ပါ။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မလိုအပ်ဘဲ စာသင်ချိန်တွေများလွန်းနေတာကြောင့်ပါ။ နားနေချိန်ရှားပါးလွန်းတာကြောင့်ပါ။
နောက်တစ်ချက်က ကျောင်းသားတွေ သင်ကြားမှုမှာ အာရုံဝင်စားမှုရအောင် သင်ကြားတဲ့နေရာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပျော်စရာဖြစ်နေရင် ပိုလို့ကောင်းပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်ဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခေတ်မီလာနေပါပြီ။ အင်တာနက်၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ တယ်လီဗေးရှင်းဆိုတာတွေဟာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းဘ၀ကနေ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ထဲကိုပါ ရောက်လာပါပြီ။ ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် အိမ်တစ်အိမ်မှာ ရေဒီယိုတစ်လုံးတောင် ရှိကြတာမဟုတ်ပါ။ အဲဒီလို အစစအရာရာ တိုးတက်လာနေပေမယ့် စာသင်ကျောင်းတွေမှာတော့ ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်က သင်ယူခဲ့ကြရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ သင်ကြားမှုပုံစံအတိုင်း သင်နေကြတုန်းပါ။ တကယ်ဆိုရင် စာသင်ကျောင်းတွေလည်း ဘက်စုံထောင့်စုံ တိုးတက်သင့်နေပါပြီ။ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေ အစုံအလင်၊ နည်းပညာသုံးအထောက်အကူပစ္စည်းတွေ အစုံအလင်နဲ့ အအေးခန်းစာသင်ခန်းတွေ ဖြစ်သင့်ပါပြီ။
ကိုယ်တို့ခေတ်ကျောင်းသားတွေအတွက် ဒီကျောင်းတွေဟာ ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့အိုင်တီခေတ်ကျောင်းသားတွေကတော့ ကိုယ်တို့ခေတ်ကစာသင်ကျောင်းတွေ၊ သင်ကြားမှုပုံစံတွေကို ပျော်စရာလို့ မြင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါ။
ဒါကြောင့် စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ သင်ကြားမှုပုံစံတွေကိုလည်း ခေတ်မီတဲ့ပုံစံ ပြောင်းပေးနိုင်ကြရင် ကျောင်းသားတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ပြန်ရလာမှာ မလွဲပါ။
ကျောင်းတွေမှာ စာရိတ္တချိန်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးချိန်၊ ကာယချိန်၊ ဂီတချိန်ဆိုပြီး အချိန်တွေတရားဝင် သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းတော်တော်များများကတော့ ဒီအချိန်တွေကို အသုံမချပါ။ ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒကို လက်တွေ့အကောင်အထည် မဖော်ပါ။ အဲဒီအချိန်တွေမှာ စာကိုပဲ ဖိသင်ပါတယ်။ မြင်နေရှိနေပါလျက်နဲ့ အသုံးချခွင့်မရတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေမှာ ဘယ်လောက်မခံချိ၊ မခံသာဖြစ်ကြလိမ့်မလဲ။ တကယ်လို့သာ အဲဒီအချိန်တွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသာ အတိအကျ အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်ရင် ကလေးတွေ တော်တော်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ စံနစ်ကတော့ အဆင်ပြေနေပါတယ်။ ဒါကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုမှာ အားနည်းနေသေးတာပါ။ တိတိကျကျနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကြရင် မဖြစ်နိုင်စရာ ဘာမှမရှိပါ။ လုပ်ကြည့်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
R = Research minded
စတဲ့ စာလုံးတွေကို စုပေါင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာတွေမှာ သုတေသီစိတ်ထားမျိုးရှိဖို့ လိုပါတယ်။ နည်းစံနစ်အသစ်တွေကို စူးစမ်းရှာဖွေပြီး စမ်းသပ်အသုံးချကြည့်ဖို့ လက်မနှေးသင့်ပါ။ ဆေးလောကမှာ ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပါရဂူကြီးတွေတောင် လူနာကိုဆေးပေးရာမှာ ပေးတဲ့ဆေးရဲ့ ထိရောက်မှုကို မကြာမကြာ Monitor လုပ်ပြီး ကုသမှုကို လိုအပ်သလို ပြောင်းပေးရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ကျောင်းတွေက ဆရာတွေ၊ ဆရာမတွေလည်း သင်ကြားမှုနည်းစံနစ်သစ်၊ ပုံစံသစ်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ကြပြီး ထိရောက်မှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်လို့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမယ့် နည်းစံနစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး တိုးတက်မှုကို အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ပေးသင့်လှပါတယ်။
ကလေးတွေကို ကစားချိန်၊ နားချိ်န် ကျကျနနသတ်မှတ်ပေးထားပြီး ကျန်တဲ့ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလည်း မျက်ခြေမပြတ်စေရဘဲ တိုးတက်ခေတ်မီတဲ့ ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်သစ်၊ နည်းစံနစ်သစ်တွေနဲ့ ကြိုးစားပေးကြမယ်ဆိုရင် လာမယ့်ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုလောက်အကြာမှာ မြန်မာတွေလည်း မညံ့ကြတာ ကမ္ဘာကို ကြွားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ရဲရဲကြီး ယုံကြည်မိပါတော့တယ်။
Posted by Han Kyi at 12:40:00 pm2comments:
အမျိုးအစား : သင်ထောက်ကူ, အတွေးအမြင်
တစ်ရက်တစ်ရက်နဲ့ အသက်တွေလည်း ကြီးလို့လာပါပြီ...
ဒါပေမယ့် အလုပ်ထဲမှာ နစ်နေတာကြောင့် အသက်ကိုတောင် သတိမထားမိတာ ကြာပါပြီ။
ကိုယ့်အလုပ်ကလည်း နားရက်ယူလို့ မဖြစ်တဲ့အပြင်
မနက်၆နာရီလောက်ကတည်းက ဇယ်စက်သလို အလုပ်တွေလုပ်လိုက်ရတာ နေ့လည် ၁နာရီလောက်မှ အိမ်ပြန်ရပါတော့တယ်။ အိမ်ရောက်ရင် ရေချိုး၊ ထမင်းစားပြီး ၂နာရီလောက်ကစပြီး အလုပ်ခွင်ပြန်ဝင်လိုက်တာ ည၉နာရီလောက်ရောက်မှ တစ်နေ့တာအလုပ်ပြီးပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဘာမှမလုပ်ချင်မကိုင်ချင်တော့လောက်အောင် အားကုန်နေပါပြီ။ တစ်လကုန်လို့ လဆန်း၇ရက်နေ့ရောက်မှပဲ တစ်ရက်တာ အနားရပါတယ်။ ကိုကြီးကျောက်ပြောသလို အားကုန်လို့ ပျားအုံစားရမယ့်ကိန်းပါ။
ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်နေမိပါလိမ့်လို့ပါ။ လူဖြစ်လာတဲ့ဘ၀မှာ သူများထက်ပိုတော်၊ ပိုတတ်၊ ပိုအောင်မြင်ချင်တဲ့ အတ္တကြောင့်လို့ပဲ ပြောလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ကအင်မတန်မှ ချမ်းသာချင်ပါတယ်။ လောဘကြီးတယ်ပြောရင်လည်း ပြောကြပါစေ။ ဆင်းရဲမှာ အင်မတန်ကြောက်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ပြောဖူးသလို ဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်၊ ဆင်းရဲရင် ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့။ ပညာတွေပိုတတ်လာအောင်၊ သူများကိုများများကူညီနိုင်အောင်ဆိုတာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ငွေများများရှိမှ ဖြစ်တာပါ။ လက်ဗလာနဲ့တော့ လူမှုရေးလုပ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါ။
လောကမှာ ကိုယ်ဝမ်းအနည်းဆုံးအချိန်ဟာ သူများက အကူအညီလာတောင်းတာကို မပေးနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ထမင်းတစ်လုပ်အတွက် တပင်တပန်းကြိုးစားနေရချိန်ကဆိုရင် သူများတွေရဲ့ဒုက္ခကို မြင်နေလျက်နဲ့ မတတ်နိုင်လို့ လက်ပိုက်ကြည့်ခဲ့ရတာ အင်မတန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့လူတွေကို ကူညီဖို့၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာ လက်ထဲမှာငွေမရှိရင်တော့ အိပ်မက်သာသာပဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကူညီရင်တော့ ရနိုင်ပေမယ့် ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်သလိုဖြစ်ရုံရှိမှာမို့ ဘာမှထိရောက်မှု ရှိမယ်မထင်ပါ။ ကိုယ်က ငွေကြေးတတ်နိုင်လို့ စက်ရုံတစ်ခုထောင်နိုင်တယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ပေးထားနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ လက်ဗလာနဲ့ ပရဟိတလုပ်ချင်နေရင် သူများအိမ်မှာ ရေသွားထမ်းပေးတာပဲ လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမျိုးသာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မာနတစ်ခွဲသားနဲ့ ဒီတစ်သက် ပရဟိတလုပ်ဖြစ်မှာတောင် မဟုတ်တော့ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက် ကိုယ့်မှာငွေလိုပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကိုယ့်ကို လူနေခြုံကြား စိတ်နေဘုံဖျားလို့ပြောရင်လည်း မတတ်နိုင်ပါ။ နိုင်ငံတကာမှာ လုပ်နေကြတဲ့ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေကို အင်မတန်မှအားကျပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ကိုယ့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဘာသာရပ်တွေကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအောင် သင်ကြားပေးပြီး မြေတောင်မြှောက်ပေးချင်တာ တကယ့်ဆန္ဒပါ။ နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မယ့် မြန်မာလူမျိုး ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်အောင် မွေးထုတ်ပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်အောင် လုပ်ချင်ပါတယ်။ မကုန်ခမ်းနိုင်တဲ့ ပညာရင်းမြစ်တွေကို နိုင်ငံတကာကို တင်ပို့ရောင်းချပြီး တိုင်းပြည်ချမ်းသာအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာ လက်ထဲမှာ နှစ်ပဲတစ်ပြားရှိရုံနဲ့ လုပ်လို့မရနိုင်ပါ။ အခုဆိုရင် အစိုးရက ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေတည်ထောင်ခွင့်ပေးထားတာကို ၀မ်းပါးမိပေမယ့် အနည်းဆုံးသိန်းသုံးလေးထောင်ရှိမှ ထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်တာမို့ ဝေးဝေးကပဲ လွမ်းနေရပါတယ်။ ကြော်ငြာတစ်ခုထဲမှာ ဒွေးပြောသလို
လက်ထဲမှာ ငွေမရှိသေးတော့ အိုင်ဒီယာတွေကို ဘေးပုံချထားရပါရဲ့။
ဒီအတွေးတွေနဲ့ တစ်ရက်တစ်ရက် မနားမနေကြိုးစားနေပေမယ့် အခုထိတော့ ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် သူဌေးမဖြစ်သေးပါ။ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သီချင်းထဲကစာသားကို ကိုးကားပြီးပြောရရင်တော့ -
အခုထိတော့ မျက်ခြေပြတ်အောင် ဖြတ်လို့မရလည်း နည်းနည်းတော့ အသက်ရှူ...
ချောင်လာစ...” လို့ပဲ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့တစ်လံပုဂံဘယ်မှမရွေ့နိုင်တာ အမှန်ပဲမို့ တစ်ရက်တစ်ရက် အကောင်းမြင်အတွေးတွေနဲ့ အားသစ်တွေမွေးရင်း မျှော်လင့်ချက်မနက်ဖြန်တွေနဲ့အတူ ရှင်သန်နေဆဲပါ။
Posted by Han Kyi at 8:31:00 pm No comments:
အချိန်တွေ ကုန်လိုက်လာတာ ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဖို့ ၄လကျော်ပဲ ကျန်ပါတော့လား။
သင်ခန်းစာကတော့ သုံးပုံနှစ်ပုံပြတ်အောင် သင်ပြီးနေပါပြီ။ တစ်ရက်ကိုမှ နည်းနည်းပဲသင်ပြီး သင်ခန်းစာကျေညက်မှုကို ဦးစားပေးထားခဲ့တာဖြစ်လို့ ပြန်လှန်သင်ကြားမှုပိုင်းကို သိပ်တော့စိတ်မပူမိပါ။ တစ်ပတ်တစ်ခါ၊ နှစ်ခါလောက် သင်ခန်းစာတွေကို ပိုင်းပြီးစာမေးပွဲငယ်လေးတွေ စစ်ပေးထားတာမို့ ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင် ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ပြီး ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။ စာသင်ချိန်မှာ နည်းစံနစ်ထက် သဘောတရားကို ဦးစားပေးပြီး သင်ထားပါတယ်။ သဘောတရားကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိသွားရင် နည်းစံနစ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေယူလို့ ရတာပါပဲ။ ကိုယ်ပြောနေကျစကားနဲ့ဆို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ How ထက်၊ ဘာကြောင့်လုပ်ရသလဲဆိုတဲ့ Why ကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ကြိုးစားပေးထားပါတယ်။ သင်ခန်းစာတွေကို Must know(သိကိုသိရမယ့်စာ)၊ Should know(သိသင့်တဲ့စာ)၊ Good to know(သိရင်တော့ပိုကောင်းသလို၊ မသိရင်လည်း ပြဿနာသိပ်မရှိတဲ့စာ) ဆိုပြီး ပိုင်းခြားပေးထားပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကဘယ်လောက်ပဲ ပေးနေပါစေ ခံယူသူသာ အဓိကဖြစ်တာမို့ အူကြောင်ကြားဖြစ်ကျန်ရစ်တဲ့ ငတိတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ မျိုးစေ့ဘယ်လောက်ပဲကောင်းပါစေ မြေဆီမြေနှစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး အပင်သန်မှုခြင်းကွာတတ်တာ သဘာဝမို့ သိပ်တော့လည်းဝမ်းမနည်းမိပါ။ ပညာရေးလောကထဲကို စ၀င်ကာစကတော့ ကိုယ်ပေးသလောက်မရရင် တော်တော်ကြီးကို ၀မ်းနည်းမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတ္တာဟိ၊ အတ္တနော၊ နာထော(မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာ)ဖြစ်တာမို့ သူတို့ဘ၀အတွက် သူတို့က ပိုကြိုးစားရမှာကို မကြိုးစားရင်တော့လည်း ဘုရားဟောတရားတော်ထဲကလို နိုင်သလောက်လုပ်ပေးပြီး သဗ္ဗေသတ္တာကမ္မသကာလုပ်ရပါတော့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘက်ကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပေးမှုကတော့ ဆံချည်တမျှင်စာလောက်တောင် မလျော့စေရပါ။
ကိုယ့်နည်းစံနစ်က သူများတွေနဲ့ တကယ့်ပြောင်းပြန်ပါ။ စာသင်ခန်းတွင်းမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခိုင်းပါတယ်။ သင်္ချာတွက်ချိန်မှာဆို လိုအပ်ရင် သီချင်းပါဖွင့်ထားပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ သီချင်းလေးညည်းရင်းတွက်တော့ ဉာဏ်ရည်တောင် ပိုလို့ထက်ပါသေးတယ်။ ဆရာ၊ တပည့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နွေးနွေးထွေးထွေးရှိအောင် အာရုံစိုက်ပြီး ကြိုးစားပေးပါတယ်။ သင်တန်းချိန်မှာ ဆရာကို ကြောက်နေဖို့မလိုပါ။ ၀ါသနာပါရင် ငြင်းလို့တောင်ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်တန်းချိန်ပြင်ပမှာတော့ ဆရာ၊ တပည့်ဒွေးရောယှက်တင် နေခွင့်မပေးပါ။ ဆရာရော၊ တပည့်ပါ သိက္ခာအကျမခံပါ။ စာသင်ကြားမှုကိုလည်း ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းထိ ဖိသင်ထားပြီး လလယ်လောက်ကစလို့ သင်ကြားမှုကို လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကို ဦးစားပေးပြီး စိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာအောင်ပဲ စစ်ဆင်ရေးလုပ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲတွင်းမှာ စာအသစ်မသင်ပါ။ ညဘက်မှာ ၁၀နာရီခွဲရင် အားလုံးအိပ်ခိုင်းပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ တစ်နှစ်တာလုပ်ထားတဲ့ အလုပ်ကပဲ စကားပြောတာပါ။ ဘာတွေထပ်သင်လို့မှာ အကျိုးမရှိတော့ပါ။
နောက် ကိုယ်ကဘယ်တော့မှ တစ်ကြိုခန့်မှန်းမေးခွန်း ထုတ်မပေးပါ။ သင်ခန်းစာအားလုံး မနိုင်တဲ့ကျောင်းသားကို သင်ခန်းစာတစ်ဝက်ကိုပဲ နိုင်အောင်၊ ကျေညက်အောင် ကြည့်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်ရဲရင် ခံရဲအောင် ကျင့်ပေးထားပါတယ်။ စာမကြိုးစားတဲ့ကျောင်းသား၊ စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့ ကျောင်းသားဆိုရင် ဘယ်လိုမှအအောင်မခံနိုင်ပါ။ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ညံ့ဖျင်းတဲ့ကလေးတစ်ယောက် ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲရောက်လာရင် လောကနာပါလိမ့်မယ်။ အချောင်သမားစိတ်ဓာတ်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်များ တိုင်းပြည့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရင် တိုင်းပြည့်အရေး မတွေးဝံ့စရာဖြစ်သလို သူ့ကိုသင်ပေးလိုက်မိတဲ့ ဆရာမှာလည်း ရင်ထုမနာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကလေးတွေကို ကိုယ်အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်သင်ပေးထားတဲ့ပညာဟာ သူများကို စော်ကားဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ကြီးဝင် ဘ၀င်မြင့်ဖို့ လုံးဝမဖြစ်စေရဘူးလို့ပါ။ သူများကို ကူညီဖို့ ၊ တိုင်းပြည်ကို အလုပ်အကြွေးပြုဖို့ သင်ပေးထားတာဖြစ်မှန်း သိအောင် ရိုက်သွင်းပါတယ်။ ကိုယ်ခံယူချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခပေးမယ့် ဘယ်လိုလူမျိုးမှ ကိုယ့်ပညာကို မရစေရပါ။ ထမင်းတစ်လုပ်အတွက် ထင်းခုတ်စားလို့ ရတဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ခံယူချက် မပျက်စေရပါ။ ကိုယ့်အယူအဆကို အများကလက်မခံတော့တဲ့ နေ့ရောက်ရင် ဒီလောကကနေ ကိုယ်နားပါတော့မယ်။
လောလောဆယ်တော့ ကိုယ့်ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ကလေးတွေရော မိဘတွေပါ တစ်သွေးတည်းတစ်သားတည်း ရှိနေတာမို့ မကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့် စာမေးပွဲအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ပေးဖို့ အခုကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေရင်း ကျေနပ်နေဆဲပါ။ ။
Posted by Han Kyi at 7:04:00 am No comments:
သာသနာဆိုတာ ဆရာ၊ ဒကာပေါင်းစည်းညီညာစွာနဲ့ ထိမ်းသိမ်းပေးမှ စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတာပါ။
ဒီအတွေးကို ဘာကြောင့်ကောက်ခါငင်ခါ တွေးမိရသလဲဆိုရင် ထိုင်ရင်းနေရင်း ကိုယ့်ရှေ့မှာအမြင်မတော်လွန်းတဲ့ မြင်ကွင်းကို မြင်နေရလို့ပါ။ ကိုယ်စာသင်တဲ့ ၀ိုင်းတစ်ဝိုင်းရဲ့ ရှေ့တည့်တည့်မှာ မွတ်စလင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့လည် ကျောင်းသားတွေကို စာမေးပွဲငယ်တစ်ခုစစ်နေရင်း အိမ်ရှေ့ဝရန်တာကနေ အပြင်ကိုမျှော်ကြည့်မိတော့ အဲဒီမွတ်စလင်ဆိုင်က လမ်းဘေးအကျဆုံးစားပွဲမှာ ထိုင်တော်မူပြီး လက်ဖက်ရည်ဘုဉ်းပေးတော်မူနေကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးလေးပါးကို တွေ့လိုက်ရပါရဲ့။ နှစ်ပါးကတော့ ပဉ္ဇင်းထင်ပါတယ်။ သက်တော် ၄၀၀န်းကျင်ရှိလို့ မှန်းကြည့်လိုက်တာပါ။ နှစ်ပါးကတော့ ကိုရင်ငယ်လေးတွေပါ။ သင်္ကန်းကိုတော့ ကျကျနနရုံထားတာ တွေ့နေရပါတယ်။
ခက်တာက ကိုယ်တော်တွေ လက်ဖက်ရည်ဘုဉ်းပေးနေတဲ့ အချိန်က မွန်းလွဲ၃နာရီ ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဒီအချိန်ဆိုတာ ကိုယ်တို့သာမန်လူဝတ်ကြောင်တွေတောင် သီလယူထားရင် လက်ဖက်ရည်သောက်လို့ မရတော့တဲ့ အချိန်ကြီးပါ။ ဒါကို ကိုယ်တော်တို့က ဘယ်လိုများ ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဘုဉ်းပေးတော်မူနေကြပါလိမ့်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့တောင်မရပါ။ ကိုရင်ငယ်လေးတွေမို့ မလိမ်မိုး၊ မလိမ်မာ မှားကြတာဆိုရင်လည်း သည်းခံလို့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ အခုလိုပဉ္ဇင်းအရွယ်သံဃာတော်တွေကိုယ်တိုင် မသင့်တော်တာတွေလုပ်နေတာ မြင်ရတော့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို သူတို့ကိုယ်စား မျက်နှာပူမိပါတော့တယ်။
အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆုံးက သူများဘာသာဝင်တွေရှေ့မှာ မသင့်တော်တာတွေကို လုပ်ပြတာပါပဲ။ ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေမှာ (ခရစ်ယာန် Roman Catholic ဂိုဏ်းတွေကလွဲရင်) ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုဟာ သာမန်လူတွေနဲ့ ထူးထူးခြားခြားမကွာလှတာမို့ သူတို့တွေအပြစ်တစ်ခုခုလုပ်ရင် သိပ်မသိသာပါ။ ကိုယ်တို့ဘာသာမှာက သံဃာတော်ဆိုတာ ဘယ်ကနေကြည့်ကြည့် သိသာမြင်သာထင်ရှားလွန်းတဲ့ သင်္ကန်းကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ အခုလိုမျိုး လုပ်နေတာ ကြားထဲကနေ မျက်နှာမထားတတ်အောင် ရှက်မိပါတယ်။ ဒီကိုယ်တော်တွေ ဒီလိုလုပ်နေရင် သူတို့ကိုယ်ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုနေကြတဲ့ ကိုယ်တို့တွေကို ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေက ဘယ်လိုမြင်ကြမှာပါလိမ့်။ ကိုယ်တော်များကတော့ စဉ်းစားတော်မူကြဟန်မတူပါ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း အခုလိုမျိုး အစ္စလာမ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လက်ဖက်ရည်ဘုဉ်းပေးတော် မူနေကြတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။
ဘယ်နေရာမှာမဆို ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ကျန်တဲ့နောက်လိုက်တွေထက် ပိုပြီးထိန်းသိမ်းရပါတယ်။ တာဝန်ပိုယူရပါတယ်။ နောက်လိုက်တွေရဲ့ အပြစ်တွေကိုတောင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူက တာဝန်ခံပေးရလေ့ ရှိပါတယ်။ အခုတော့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဒီကိုယ်တော်တွေလုပ်နေတာက သူတို့လုပ်သမျှအပြစ်တွေကို ကိုယ်တို့ဒကာ၊ ဒကာမတွေက ၀ိုင်းဝန်းခံကြရတော့မလို ဖြစ်နေပါရဲ့။
တစ်ခါတစ်ခါများ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ အမြင်မတော်တာတွေ တွေ့ရတာများလွန်းတော့ ကိုယ်နေနေတာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင် တိုင်းပြည်ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါလေစလို့ တွေးယူရပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘုရားပွဲရန်ပုံငွေအတွက် လောင်းကစားဝိုင်းတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာ လုပ်ခွင့်ပြုပါသတဲ့။ ၀ိုင်းသေးတစ်ဝိုင်းကို ဘယ်လောက်၊ ၀ိုင်းကြီးတစ်ဝိုင်းကို ဘယ်လောက်လို့ သတ်မှတ်ပြီး အကောက်ကောက်ပါတယ်။ အဲဒီရငွေဟာ တစ်ညကို သိန်း၂၀လောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီငွေနဲ့ ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက်လုပ်တယ်ဆိုပါဦးတော့ ကိုယ်တို့တွေ ဘယ်လိုအသိတရား၊ ဘယ်လိုဦးဏှောက်မျိုးတွေနဲ့ ဒီဘုရားကျောင်းကန်တွေကို ရှိခိုးကန်တော့ရမှာပါလိမ့်။
တကယ်ဆိုရင် ဒကာ၊ ဒကာမတွေ လောင်းကစားလုပ်နေရင်တောင် ဆရာဘုန်းကြီးက တားရပြုရမှာပါ။ အခုတော့ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေကပါ ဦးစီးဦးဆောင် ပြုတော်မူနေကြတော့ ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာ ကစားဝိုင်းသုတ်များပါလေရော့သလား တွေးချင်စရာ ဖြစ်နေရပါပြီ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘုရားပွဲရှိလို့ ညဘက် ပွဲဈေးတန်းလမ်းလျှောက်ဖြစ်ရင် အကုသိုလ်တွေ အောတိုက်နေအောင် ရပြီးမှ အိမ်ပြန်ရောက်ပါတော့တယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မိန်းကလေးသုံးလေးယောက်လောက် ဒိုင်ခံနေတဲ့ အံကလုံဝိုင်း( အံစာတုံးမျက်နှာခြောက်ဖက်လုံးမှာ အရုပ်တွေဆွဲထားပါတယ်။ အဲဒီလို အံစာတုံးမျိုး လေးလုံး၊ တချို့က ခြောက်လုံး၊ ရှစ်လုံးကို တန်းပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်။ အံစာတုံးပေါ်က အရုပ်တွေကို အောက်မှာခင်းထားတဲ့ ပတ္တူပေါ်မှာဆွဲပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်ထိုးချင်တဲ့ အရုပ်ပေါ်မှာ ပိုက်ဆံထည့်ပြီးလို့ လူစုံရင် အံစာတုံးတွေတင်ထားတဲ့ တန်းကိုကြိုးနဲ့ ဆွဲချပါတယ်။ အောက်ကျလာတဲ့ အံစာတုံးတွေရဲ့ အပေါ်မျက်နှာပြင်က အရုပ်တွေကို ထိုးထားတဲ့သူက အလျော်ရပါတယ်။ အံစာတုံးနှစ်တုံးမှာ ကိုယ်ထိုးတဲ့အရုပ်ပေါ်ရင် နှစ်ဆ၊ သုံးတုံးမှာပါရင် သုံးဆစသည်ဖြင့် လျော်ပေးတဲ့ လောင်းကစားပါ။ အညာမှာတော့ ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ ဂလုန်းဂလုန်းလို့ခေါ်ပါတယ်) မှာ သံဃာတော်တွေချည်းပဲ ဆယ်ပါး၊ ဆယ့်ငါးပါးလောက် အော်လိုက်ဟစ်လိုက်နဲ့ လောင်းကစားလုပ်နေတဲ့ စိတ်ညစ်စရာမြင်ကွင်းမျိုးတွေကို ဘယ်သူခံစားနိုင်မလဲလေ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ဘေးမှာ တစ်ခြားဘာသာဝင်တစ်ယောက် ပါနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ပိုဆိုးပါသေးတယ်။ ကိုယ့်မှာ မျက်နှာပူပူနဲ့ မမြင်ဟန်ဆောင်ရတော့တာပါပဲ။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ကိုယ့်မိတ်ဆွေကများ တစ်ခုခုကို သဘောကျလို့ ပြုံးရင် သိက္ခာမလုံတော့သလို နေရထိုင်ရတာလည်း မချမ်းမြေ့တော့ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးရှိကြတဲ့ တခြားလူတွေလည်း ကိုယ်လိုပဲထပ်တူထပ်မျှ ခံစားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဆေးကျောင်းတတ်နေတုန်းကပါ။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ ဂျာမနီနိုင်ငံသား သုံးယောက်နဲ့အတူ မြို့ထဲကိုထွက်လည်ကြရင်း မိတ်ဆွေဂျာမန်အမျိုးသမီးက ကိုယ့်ကိုမေးပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ကြသလဲပေါ့။ သဘောရိုးနဲ့ သိချင်လို့မေးတာပါ။ ကိုယ်ကလည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့ပဲ ရှင်းပြပါတယ်။ ရဟန်းတော်တွေဟာ တစ်သက်တာပတ်လုံး ညနေစာဘုဉ်းမပေးကြတဲ့ အကြောင်းပါထည့်ပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ ကိုယ်က အဲဒီလိုရှင်းပြနေချိန်မှာပဲ ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကနေ ကိုယ်တော်လေးနှစ်ပါး ဟင်းထုပ်တွေဆွဲပြီးထွက်လာကြတာ မြင်ကြရပါရော။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးရဲ့ အကြည့်က အဲဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးဆီရောက်သွားတော့တာမို့ ကိုယ့်မှာကိုယ့်သံဃာတွေ သိက္ခာမကျရအောင် ဒါကသူတို့ကျောင်းမှာ ရှိကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးရအောင် ဟင်းလာဝယ်ကြတာလို့ ယုတ္တိတန်သည်၊ မတန်သည် မစဉ်းစားနိုင်တော့ပဲ လိမ်ရပါတော့တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ၀မ်းနည်းလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။
သံဃာတော်တွေဆိုတာ ကိုယ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ကိုယ်ပွားတော်တွေမို့ ကိုယ်အင်မတန်ပဲ ကြည်ညိုပါတယ်။ ဘာသာဝင်တိုင်းကလည်း ကိုယ့်လိုပဲ ကြည်ညိုကြမှာ မလွဲပါ။ ကြည်ညိုသဒ္ဓါပွားလွန်းလို့ပဲ တပင်တပန်းရှာဖွေထားကြတဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို အမြတ်တနိုး လှူဒါန်းကြတာပါ။ ကြည်ညိုလွန်းလို့ပဲ ကိုယ့်ထက်အသက်အဆမတန်ငယ်ကြတဲ့ ကိုရင်လေးတွေကိုတောင် ဦးချကန်တော့ကြတာပါ။ သူများကြည်ညိုလေးစားတာ၊ အားကိုးအားထားပြုခံရတဲ့သူတွေဟာ လုံးဝမှားလို့မရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို သူများကိုးကွယ်ခံရတဲ့ ကိုယ်တော်တွေဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့တောင် တာဝန်ပိုကြီးပါလိမ့်မယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့သလို ဆရာနဲ့၊ ဒကာဆိုတာ ကျွန်းကိုင်းမီ၊ ကိုင်းကျွန်းမီဖြစ်တာမို့ ဒကာလမ်းမှားရင် ဆရာတော်သံဃာတော်တွေက ပြုပြင်ပေးသလို၊ သံဃာတော်တွေကို လမ်းမှားမရောက်အောင် ထိန်းသိမ်းကြဖို့လည်း ဒကာတွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် မှားတဲ့သူကို မှန်အောင်ပြုပြင်ပေးခြင်းဟာ ကုသိုလ်အင်မတန်ရတဲ့ အလုပ်ပါ။ ဒါကိုပဲ သာသနာပြုခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက်တဲ့ အလုပ်ထက်ပိုပြီး အရေးကြီးပါသေးတယ်။ အဲဒီလို တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြရင်ဖြင့် ကိုယ်တို့ရဲ့ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဟာ နေလို၊ လလိုထွန်းပလာမှာ မလွဲပါ။
တကယ်လို့များ ဒီပို့စ်ကို ဆရာတော်၊ သံဃာတော်တွေများ ဖတ်မိခဲ့ရင် တပည့်တော်တို့ဒကာ၊ ဒကာမတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်စာနာပြီး သာသနာသန့်စင်ကြည်လင်ရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပေးတော်မူကြဖို့ ရိုသေညွှတ်နိုး လက်စုံမိုးပြီး ရှိခိုးတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ဘုရား။ ။
Posted by Han Kyi at 4:10:00 am 1 comment:
စိတ်တိုရင် ကျောဘယ်ဘက်ခြမ်း(နှလုံးရှိတဲ့နောက်ဘက်)က အောင့်အောင့်လာတယ်။
စိတ်မတိုအောင်နေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် တိုမိရပြန်ပြီ။ ကျန်တဲ့ကိစ္စအားလုံးမှာ စိတ်မတိုအောင် ထိန်းလို့ရနိုင်ပေမယ့် ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာမို့ ကရုဏာဒေါသကတော့ မထွက်ချင်လည်း ထွက်နေရတော့တာပါပဲ။
ကျောင်းသားတွေကို စာတင်မကဘဲ ဘက်စုံထောင့်စုံက တော်စေ၊ ကောင်းစေချင်တာ ကိုယ့်ဆန္ဒပါ။ အစစအရာရာ သူများထက်ထူးချွန်ကြတဲ့၊ သူများထက်ဝီရိယကောင်းတဲ့၊ သူများထက်စေတနာပိုတဲ့၊ သူများထက်အနစ်နာခံနိုင်တဲ့၊ သူများထက်ပိုအသိရှိတဲ၊့ သူများထက်ပိုဇွဲကောင်းတဲ့၊ သူများထက်ပိုပြီးလူရေးလူမှုနားလည်တဲ့၊ သူများထက်ပိုပြီးမိဘကိုအလုပ်အကြွေးပြုမယ့်၊ သူများထက်ပိုပြီးတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်စေမယ့် ကလေးတွေဖြစ်စေချင်လှပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်တို့တွေ လုပ်နေ၊ ကိုင်နေ၊ ကြိုးစားနေ၊ ပြောနေ၊ ဆိုနေသမျှဟာ သူတို့လေးတွေအတွက်တွေချည်းပါ။ သူတို့လျှောက်မယ့်လမ်း ဖြောင့်ဖြူးအောင်၊ သူတို့စားမယ့်တမင်း ဟင်းကောင်းအောင်၊ သူတို့နေမယ့်တိုက် ပိုခမ်းနားအောင်၊ သူတို့မွေးလာမယ့်သားသမီး ဂုဏ်ပိုရှိအောင်၊ သူတို့ကို သူများတွေက ပိုလေးစားအောင် ရည်ရွယ်ချက်တွေ အပြည့်အသိပ်နဲ့ပါ။
ပညာရေးနယ်ပယ်ထဲကို စ၀င်လိုက်ကတည်းက ကိုယ့်မှာလုပ်သမျှအလုပ်၊ ဖတ်သမျှစာ၊ တွေးသမျှအတွေးအားလုံး ကိုယ့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ချည်းပါပဲ။ ကိုယ်အားသန်တဲ့ ရသစာပေဘက်ကိုတောင် ခေါင်းသိပ်မလှည်ြ့ဖစ်တော့ဘဲ ကျောင်းသားစိတ်ပညာ၊ သင်ကြားမှုနည်းစံနစ်တွေ၊ ကလေးသူငယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစာပေတွေ၊ သင်ရိုးညွှန်းတန်းတွေ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေ၊ သူတို့တွေဗဟုသုတဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းအရာတွေ၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် သူတို့တွေ အိပ်ငိုက်တတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ ပြောပြရအောင် ဟာသတိုလေးတွေပဲ အားစိုက်ဖတ်ရပါတယ်။ တွေးမျှအတွေးတိုင်းမှာလည်း ဘယ်ကျောင်းသားကို ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာတွေပဲ ပါနေပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့ တစ်ရက်တစ်ရက်မှာ ၁၂နာရီလောက် သူတို့ဘ၀ကောင်းကျိုးကို အားသွန်ခွန်စိုက် သင်လိုက်၊ ကြားလိုက်၊ ဆိုဆုံးမလိုက်နဲ့ လုပ်လိုက်ရတာ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ပါးစပ်တောင်မဟနိုင်တော့တဲ့ အထိဆိုပါတော့။
တကယ်ဆို ကိုယ့်ဘ၀တစ်ခုလုံးဟာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ သူတို့အောင်မြင်မှုဟာ ကိုယ့်အောင်မြင်မှုပါ။ သူတို့အနာဂတ်ဟာ ကိုယ့်အနာဂတ်ပါ။ သူတို့သမိုင်းကြောင်းဟာလည်း ကိုယ့်သမိုင်းကြောင်းပါပဲ။ ဒါကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကလွဲလို့ ဘယ်သူမှမသိကြပါ။ သိဖို့လည်း မလိုအပ်ပါ။ သိလည်း သိစရာမလိုပါ။ သိလည်းမသိစေချင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အရင်းကြီးကြီးထည့်ထားရရင် အမြတ်များများလိုချင်တဲ့ လူ့သဘာဝအရ ကိုယ့်ဘ၀တစ်ခုလုံး ရင်းနှီးထားရတဲ့ ကိုယ့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆီက အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးတွေ ပြန်ရချင်တာ ကိုယ့်အပြစ်လို့ ဆိုကြရင်လည်း ရင်ကော့ပြီးခံဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကလေးတွေ ပုံစံမကျသေးတာ တွေ့ရရင် ဘယ်လိုမှစိတ်ထိန်းလို့မရအောင် စိတ်တိုမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာရှိအမျက်အပြင်မထွက်ဆိုပြီး ဘယ်သကောင့်သားကမှန်းမသိ ဆိုရိုးထားခဲ့တာကြောင့် ကိုယ့်မှာဘယ်သူမှမသိအောင် ကိုယ့်ဒေါသကို ပြန်ပြန်မြိုချနေရတာ တော်တော်ဆိုးလှပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်တိုနေပါစေ ကိုယ့်ဒေါသယမ်းအိုးကို လူမမြင်အောင် ထိန်းသိမ်းရင်း ဟန်မပျက်နေရတာ တော်တော့်ကို အခံရခက်လှပါရဲ့။
ဆရာဆိုတာ “စေတနာ၊ ၀ါသနာ၊ အနစ်နာ” နာသုံးနာနဲ့ ပြည့်ရပါမယ်တဲ့။ ကိုယ့်မှာတော့ နာသုံးနာတင်မက “နှလုံးနာ”ပါ ထပ်တိုးလို့ အခုဆိုရင် နာလေးနာဖြစ်နေပါပေါ့လား။ ။
Posted by Han Kyi at 4:07:00 am No comments:
အမှတ်တရ တစ်ပုဒ်ရေးပြီးတင်လိုက်တာ ဘယ်ရောက်သွားတယ်မသိ။ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားတယ်။ စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ထပ်ရေးရင်ရမှန်းသိပေမယ့် ခံစားချက်ချင်းက မတူနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် နောက်နေ့မှ ပြန်ရေးဖြစ်တော့မယ်။
ဒါပေမယ့် အမှတ်တရ နေ့စွဲဆိုတာ နှစ်ခါပြန်မရတာမို့ တစ်ခုခုတော့ရေးပြီး တင်ဖြစ်အောင်တင်လိုက်ပါတယ်။
Posted by Han Kyi at 10:44:00 am No comments:
Posted by Han Kyi at 9:35:00 am2comments:
ခွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့ ခွေးကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည် သဘောပေါက်ပြီး ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့လူတွေအနေနဲ့တော့ ခွေးတွေဟာ ဘာကြောင့် ဒီလိုအပြုအမူတွေ ရှိနေရတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အံ့သြစရာတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဟောင်ခြင်း၊ ကိုက်ခြင်း၊ ကိုက်ဝါးခြင်းနဲ့ ခွေးကလေးတွေရဲ့ အခြားသောအပြုအမူတွေကို ခွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို မှားယွင်းသဘောပေါက်လေ့ရှိကြပြီး မှားယွင်းစွာကိုင်တွယ်ကြလေ့ ရှိကြပါတယ်။
ခွေးပိုင်ရှင်အသစ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခွေးမွေးဖို့ စိတ်ကူးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခွေးရဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိနားလည်ထားပြီး ကိုယ့်ခွေကို အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းလိုကြပါတယ်။ ခွေးကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူတွေကို အကောင်းဆုံးနားလည်ထားခြင်းဟာ ကိုယ့်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေကို အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ ကိုယ့်ခွေးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ခွေးကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် . . .
ခွေးအများစုဟာ ဟောင်တာ၊ အီတာ၊ အူတာတွေကို အဆင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟောင်နေခြင်းကတော့ အပြုအမူဆိုင်ရာ ပြဿနာဖြစ်ပြီး ဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာကို မဖြေရှင်းခင်မှာ ကိုယ့်ခွေးဟာဘာကြောင့် ဒီလိုဟောင်နေရသလဲဆိုတာကို နေရာမှာတင် အရင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ခွေးတွေဟာ အောက်ပါအချက်တွေကြောင့် ဟောင်လေ့ရှိကြပါတယ်။
- သတိပေးခြင်း၊ အချက်ပေးခြင်း
- ကစားမြူးထူးခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း
- အာရုံစိုက်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း
- အခြားခွေးများကို အချက်ပေးခြင်း
အရာဝထ္ထုတွေကို ကိုက်ဝါးခြင်းဟာ ခွေးတွေရဲ့ သဘာဝဖြစ်သလို စိတ်ညစ်စရာအကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ခွေးဟာ ကိုက်ဝါးတဲ့အဆင့်ကနေ ဖျက်ဆီးတဲ့အဆင့်ထိ ရောက်လာရင်တော့ အပြူအမူဆိုင်ရာ ပြဿနာဖြစ်လာပါပြီ။ ခွေးတွေကိုက်ဝါးရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေကတော့
- ခွေးသားပေါက်လေးတွေ သွားပေါက်လာခြင်း
- ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်း၊ စွမ်းအင်များပိုလျှံခြင်း
- ခွေးငယ်လေးများ သိလိုစိတ်ပြင်းပြခြင်း
ကိုယ့်ခွေးဟာ ကိုက်ဝါးတတ်တဲ့ ၀ါသနာဆိုးဆိုးဝါးဝါးရှိနေရင် ကိုက်ဝါးနိုင်တဲ့ အရုပ်များများထားပေးပြီး ကိုက်ဝါးစေသင့်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ခွေးနဲ့အဝေးမှာ ထားပါ။ ကိုယ်အပြင်သွားစရာရှိရင် ခွေးကိုပျက်စီးနိုင်မှုအနည်းဆုံးနေရာမှာ ထားခဲ့သင့်ပါတယ်။ ခွေးဟာ မကိုက်ဝါးသင့်တာကို ကိုက်ဝါးနေတာတွေ့ခဲ့ရင် မလုပ်ဖို့ ငေါက်နိုင်ဆူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် သူကိုက်ဝါးနေတဲ့ အရာက်ို ကိုက်ဝါးစရာ အရုပ်တစ်ခုနဲ့ အစားထိုးပေးပါ။
အခွင့်အရေးသာရရင် ခွေးကအများစုဟာ တူးလို့ဆွလို့ရသမျှနေရာတိုင်းမှာ တူးကြယက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုဗီဇဖြစ်ပါတယ်။ Terriers လိုခွေးမျိုးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမဲလိုက်တဲ့အလေ့အကျင့်ရာဇ၀င်အရ ပိုပြီးတူးကြဆွကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ခွေးတွေဟာ အောက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့် တူးကြဆွကြပါတယ်။
- ပျင်းရိခြင်း၊ စွမ်းအင်ပိုလျှံခြင်း
- စိုးရိမ်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း
- ပိုင်ဆိုင်မှု(အရိုး၊ အရုပ်စသည်)ကို သိုဝှက်ရန်
- လွတ်မြောက်ရန်၊ တစ်နေရာရာသို့ ၀င်ရောက်ရန်
ကိုယ့်ခွေးဟာ ကိုယ့်ခြံထဲမှာ တူးဆွနေရင်တော့ တော်တော်လေး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်တူးနေသလဲဆိုတာကို လေ့လာပြီး ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ပါ။ ဘယ်လိုမှပြောလို့မရအောင် တတူးထဲတူးနေရင်တော့ သဲသေတ္တာလိုမျုိုး သူတို့တွေစိတ်ကြိုက်တူးလို့ဆွလို့ရမယ့် အရာတစ်ခုထားပေးလိုက်တာ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
(၄) စွန့်ပစ်ခံရမှာ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း
စွန့်ပစ်ခံရမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဟာ ခွေးတွေမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အပြုအမူဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အသံပေးခြင်း၊ ကိုက်ဝါးခြင်း၊ သဘာဝမကျစွာ ဆီးသွားခြင်း၊ ၀မ်းသွားခြင်း၊ အခြားသဘာဝမကျတဲ့ အပြုအမူများစွာတို့ဟာ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်မှာ တွေ့လေ့ရှိပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ အပြုအမူအားလုံးကို တွေ့ရဖို့တော့ မျှော်လင့်ထားလို့ မရပြန်ပါ။ စွန့်ပစ်ခံရမှာစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ အောက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
- ခွေးပိုင်ရှင်ထွက်ခွာဖို့ ပြင်ဆင်နေရင် ခွေးဟာ စွန့်ပစ်ခံရမှာ စိုးရိမ်ပူပန်ပါတယ်
- ပိုင်ရှင်ထွက်သွားပြီး ၁၀မိနစ်က ၁၅မိနစ်အတွင်းမှာ သဘာဝမကျတဲ့ အပြုအမူတွေ ပြလေ့ရှိပါတယ်
- ခွေးဟာ ပိုင်ရှင်နောက်ကို ပြေးလိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်မယ်
- ပိုင်ရှင်ကို ထိတွေ့နိုင်သမျှ ထိတွေ့ဖို့ ကြိုးစားမယ်
(၅) မသင့်တော်သော အညစ်အကြေးစွန့်ခြင်း
အညစ်အကြေးကို မဆင်မခြင်စွန့်တာဟာ ခွေးတွေရဲ့ စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံး အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအကျင့်ဆိုးဟာ ကိုယ့်အိမ်ကို ညစ်ပတ်စေရုံသာမက အပြင်သွားတဲ့အခါ၊ အလည်အပတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ခွေးကိုခေါ်သွားလို့ မဖြစ်အောင် ဆိုးပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အညစ်အကြေးတွေစွန့်နေရင် တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်နဲ့ ပထမဆုံး တိုင်ပင်ပြီး ခွေးမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာရှိနေသလား အရင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာမရှိရင်တော့ အောက်ပါအချက်တွေထဲက ဘယ်အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်သလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
- အာရုံစိုက်ခံရအောင် လုပ်ခြင်း
ခွေးသားပေါက်ကလေးတွေမှာတော့ ၁၂ပတ်သားအရွယ်အထိ ကြုံရာနေရာမှာ အညစ်အကြေးစွန့်တာကို မရှေင်မလွှဲသာ လက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ခွေးကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ ဒီအကျင့်ဆိုးကို ပျောက်အောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ပေးမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အမြဲတမ်းစားစရာတောင်းနေတတ်တာ ခွေးတွေရဲ့ အကျင့်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွေးပ်ိုင်ရှင်အများစုကတော့ တောင်းတိုင်းကျွေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုသာ တောင်းတိုင်းကျွေးနေရင် ခွေးတွေရဲ့ အစာခြေဖျက်မှုမှာ ပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် အ၀လွန်ရောဂါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခွေးတွေက အစားမက်ကြတာကြောင့် တောင်းကြတာမှန်ပေမယ့် စားကြွင်းစားကျန်ကိုတော့ မကျွေးသင့်ပါ။ မှတ်ထားသင့်တာက အစာကျွေးခြင်းဟာ ခွေးကိုချစ်တာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ခွေးက ကိုယ့်ကို တအီအီအစာတောင်းနေတာကို မကျွေးဘဲနေဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေးတော့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတောင်းတိုင်း ချချကျွေးနေရင်တော့ ရေရှည်မှာ ပြဿနာနဲ့ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အစာမစားခင်မှာ ကိုယ့်ကိုငေးကြည့်လို့ မမြင်နိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ခွေးကိုနေခိုင်းသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အခြားအခန်းတစ်ခုမှာ ထားသင့်ပါတယ်။ ခွေးက ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်မိသားစု စားသောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ သူ့ကိုဆုချတဲ့အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျွေးမွေးပြုစုပေးရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ခွေးတွေဟာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ အရာဝထ္ထုတွေနောက်ကနေ ပြေးလိုက်လေ့ရှိတာဟာ သူတို့ရဲ့ ဗီဇကလာတဲ့ အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးတွေဟာ ပြေးလွှားနေတဲ့ အခြားတိရစ္ဆာန်တွေ၊ ကားတွေနဲ့ လူတွေနောက်ကို ပျော်ပျော်ကြီး ပြေးလိုက်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီအကျင့်ရဲ့ ရလာဒ်ကတော့ အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတွေပါပဲ။ ခွေးတွေရဲ့ အဲဒီလို ပြေးလိုက်လေ့ရှိတဲ့ အကျင့်ကို ပြင်ပေးဖို့မတတ်နိုင်ရင်တော့ အပျက်အစီးနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် အောက်ပါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတွေကို ဆောင်ရွက်ထားသင့်ပါတယ်။
- အိမ်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ခွေးကို လည်ပတ်ပတ်ပြီး ကြိုးချည်ထားသင့်ပါတယ်
- ကိုယ့်ခွေးကို ကိုယ်ခေါ်ရင်လာအောင် ကျင့်ပေးထားပါ
- ခွေးကကိုယ့်ကို အာရုံစိုက်စေမယ့် ခရာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆူဆူညံညံ အသံပေးနိုင်မယ့်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်လှမ်းမီရာမှာ ထားပါ
- လိမ့်နေတဲ့အရာတွေ ခုန်ပေါက်နေတဲ့အရာတွေကို အမြဲသတိထားပါ
အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ခွေးကို စံနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ခွေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ကာကွယ်ပေးရာရောက်ပါတယ်။
ခွေးငယ်လေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့မိခင်ကို ကြိုဆိုဖို့၊ နှုတ်ဆက်ဖို့နဲ့ အမေနဲ့ ထိတွေ့နိုင်ဖို့ ခုန်ပေါက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လူတွေကို နှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်ပါ ခုန်ပေါက်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူတို့မှာ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတာကို ဖော်ပြနိုင်ဖို့လည်း ခုန်ပေါက်လေ့ရှိပါသေးတယ်။ ခုန်ပေါက်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရသလို အန္တရာယ်လဲ ကြီးပါတယ်။ ခွေးတွေခုန်ပေါက်တဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အောင်အောင်မြင်မြင်တော့ မဖျောက်နိုင်သေးပါ။ ခွေးရဲ့ခြေထောက်ကို ပင့်ပေးလိုက်တာ၊ လက်သည်းတွေကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်တာ၊ ခွေးကို တွန်းလိုက်တာတို့ဟာ တစ်ခါတစ်ခါမှာ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွေးအများစုအတွက်တော့ ဒီလိုလုပ်ခြင်းကြောင့် ခွေးရဲ့အထင်လွဲမှုကို ရနိုင်ပါတယ်။ ခုန်ပေါက်တာဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူရဲ့အာရုံစိုက်မှုကို ရဖို့လုပ်တဲ့ အပြုအမူလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခွေးကဒီလို ခုန်ပေါက်တာဟာ ကိုယ့်အတွက် ဆုလာဘ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါကိုမလိုချင်ရင်တော့ ဂရုမစိုက်ဘဲ ရှောင်ထွက်သွားတာဟာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အရိုးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးနဲ့ မျက်လုံးချင်းမဆုံပါစေနဲ့။ ခွေးကို စကားလည်းမပြောပါနဲ့။ ထိလည်းမထိပါနဲ့၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုသာ ဟန်မပျက်ဆက်လုပ်နေလိုက်ပါ။ ခွေးက ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ဖြစ်သွားရင် ဆုချလိုက်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးရင် မကြာခင်မှာပဲ ခွေးက ကိုယ့်သဘောထားကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
ခွေးတွေဟာ ဗီဇနဲ့ သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့် ကိုက်ကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ခွေးငယ်လေးတွေဟာ အခြားခွေးတွေနဲ့ လူတွေကို သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့နဲ့ သူတို့နေတဲ့နေရာအကြောင်း လေ့လာဖို့ ကိုက်လေ့ခဲလေ့ ရှိကြပါတယ်။ သွားဖြဲတာနဲ့ ကိုက်ခဲတာဟာ လက်သင့်မခံနိုင်တဲ့ အပြုအမူဖြစ်ကြောင်း ခွေးပိုင်ရှင်က ကိုယ့်ခွေးငယ်လေးတွေကို သိအောင်လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ခွေးငယ်လေးဘ၀ကရလာတဲ့ အကျင့်အပြင် အောက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ကိုက်ခဲလေ့ရှိကြပါတယ်။
- ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့
- ပိုင်ဆိုင်မှုကို ကာကွယ်ဖို့
- နာကျင်ခြင်းနှင့် ဖျားနာခြင်း
- အင်အားကြီးကြောင်း ပြသဖို့
- အမဲလိုက်တဲ့ ဗီဇ
အချို့ခွေးမျိုးတွေဟာ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်လ်ို့ ယူဆကြပေမယ့် ခွေးအမျိုးအစားရွေးပြီး မွေးဖို့လည်း မလိုပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ပိုင်ရှင်နဲ့ ခွေးမွေးသူတွေဟာ ကိုယ့်ခွေးကို လေ့ကျင့်ပေးတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အသားကျအောင် လုပ်ပေးတာတွေနဲ့ ကိုက်ခဲတတ်တဲ့ ဗီဇစိတ်ကို လျော့အောင်လုပ်ပေးနိုင်သူတွေ ဖြစ်ကြလို့ပါ။
စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ ဟိန်းဟောင်ခြင်း၊ မာန်ဖီခြင်း၊ သွားဖြဲပြခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်းနဲ့ ခုန်အုပ်ဖို့အတွက် အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအပြုအမူတွေကို တွေ့ရရင်တော့ ကိုယ့်ခွေးဟာ စိတ်တိုသောင်းကျန်းဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ သတိပြုပြီး အရင်က ဘယ်လိုသဘောကောင်းတယ်ဆိုတာ မေ့ပစ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အလွယ်တကူအကြမ်းဖက်လေ့ရှိပြီး နိုင်ထက်စီးနင်းပြုလေ့ရှိတဲ့ ရာဇ၀င်ရှိတဲ့ခွေးတွေနဲ့ စိတ်တိုသောင်းကျန်းလေ့ရှိတဲ့ မိဘတွေက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ခွေးတွေဟာ အခြားခွေးတွေနဲ့ လူတွေအပေါ်မှာ စိတ်တိုသောင်းကျန်းအနိုင်ကျင့်ချင်တဲ့ လက္ခဏာမျိုးတွေ အလွယ်တကူ ပြလေ့ရှိပါတယ်။ စိတ်တိုသောင်းကျန်းရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းဟာ ကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ ခွေးမှာ စိတ်တိုလွယ်ပြီး ကိုက်ချင်ခဲချင်တဲ့ အပြုအမူတွေရှိနေရင်တော့ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်နဲ့ အရင်တိုင်ပင်သင့်ပါယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြောင့်လည်း ခွေးတွေဟာ စိတ်တိုသောင်းကျန်းလေ့ရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ မရှိခဲ့ရင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ခွေးလေ့ကျင့်ရေးဆရာနဲ့ တိုင်ပင်ရပါလိမ့်မယ်။ တော်တော်ကြီးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သောင်းကျန်းတဲ့ခွေးတွေကိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူတွေကို အနှောင့်အယှက်မပေးနိုင်အောင် သတိထားပြီး ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ခွေးကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သူတို့မှာ ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားလည်း ရှိသလို လူတွေလိုပဲ အကျင့်စရိုက်တွေ ရှိနေတာကြောင့် လူနဲ့နီးစပ်တယ်လို့ ခေါ်တာဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။
If given the chance, most dogs will do some amount of digging - it'samatter of instinct. Certain breeds, like Terriers, are more prone to digging because of their hunting histories. In general, most dogs dig for these reasons:
If your dog digs up your yard, it can get pretty frustrating for you. Try and determine the cause of the digging, then work to eliminate that source. Spend more time with your dog, give him more exercise, and work on extra training. If digging is inevitable, set aside an area where your dog can learn it is "okay" to dig, likeasand box.
Inappropriate elimination is unavoidable in puppies, especially before 12 weeks of age. Older dogs are another story - many require serious behavior modification to rid them of the habit because you must often alter their perception of themselves.
A dog's desire to chase moving things is simplyadisplay of predatory instinct. Many dogs will chase other animals, people and cars. All of these can lead to dangerous and devastating outcomes! While you may not be able to stop your dog from trying to chase, you can take steps to prevent disaster.
Haveadog whistle or noisemaker on hand to get your dog's attention.
Your best chance at success is to keep the chase from getting out of control. Dedicated training over the course of your dog's life will teach him to focus his attention on you first - before running off.
Dog aggression is exhibited by growling, snarling, showing teeth, lunging and biting. It is important to know that any dog has the potential to become aggressive, regardless of breed or history. However, dogs with violent or abusive histories and those bred from dogs with aggressive tendencies are much more likely to exhibit aggressive behavior towards people or other dogs. Reasons for aggression are basically the same as the reasonsadog will bite or snap, but overall canine aggression isamuch more serious problem. If your dog has aggressive tendencies, consult your vet first - it may stem fromahealth problem. Then, seek the help of an experienced dog trainer. Serious measures should be taken to keep others safe from aggressive dogs!
Posted by Han Kyi at 10:08:00 am No comments:
အမျိုးအစား : ခွေးကလေးတွေ
လူနဲ့အနီးစပ်ဆုံးနဲ့၊ ချစ်စရာအကောင်းဆုံးဟာ ခွေးကလေးတွေပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
သူတို့လေးတွေဟာ လူရဲ့အရိပ်အကဲကို အကောင်းဆုံး အကဲဖြတ်နိုင်တဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေလည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေကတော့ သူတို့ချစ်တဲ့ ခွေးကလေးတွေရဲ့ သင်္ကေတ ဘာသာစကားတွေကို နားမလည်နိုင်ကြပါ။ အခုအခါမှာတော့ သုတေသီတွေရဲ့ လေ့လာမှုကြောင့် ချစ်စရာပါပီလေးတွေရဲ့ ဘာသာစကားတွေကို အကောင်းဆုံး ပြန်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွေးကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သင်္ကေတ ဘာသာစကားတွေကို နားလည်နိုင်ရင် သူတို့လေးတွေကို နားလည်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို သိနိုင်သလို၊ သူတို့တွေဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုလည်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ ခွေးကလေးတွေဟာ စကားပြောနိုင်ကြတာ မဟုတ်လို့ သူတို့ပြောချင်တာကို သရုပ်ဖော်ရာမှာ ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားကိုပဲ ဦးစားပေး အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘာသာဗေဒကို နားလည်နိုင်ရင် သူတို့လေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးရာ training မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လေးတွေရဲ့ ယေဘုယျအပြုအမူပြဿနာ common behavior problems တွေကို ဖြေရှင်းပေးရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ...ခွေးကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားတွေကို ဘာသာပြန်ဆိုကြည့်ကြပါစို့...
မတ်မတ်စန့်စန့်ရပ်လေ့ရှိပြီး ခေါင်းကိုလည်း မော့ထားလေ့ရှိပါတယ်။ နားတွေကို စွင့်ကားထားပြီး မျက်လုံးကလည်း တောက်ပနေတတ်ပါတယ်။ ပါးစပ်ကိုလည်း အနည်းငယ်ဟထားတတ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ အမြီးကို ခပ်ကွေးကွေးထားလို့ ညင်ညင်သာသာရမ်းနေတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ခပ်လျော့လျော့လေး တွဲလောင်းချတားတတ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတူ သက်တောင့်သက်သာရှိနေပြီး ရန်လိုတဲ့အမူအယာ၊ ခြိမ်းခြောက်လိုတဲ့ သွင်ပြင်တွေမရှိဘဲ ဖော်ရွေတဲ့ပုံစံပေါ်ပါတယ်။
ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်နဲ့ ကိုယ်ဟန်လက္ခဏာချင်း တူညီပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမြီးကို ဝှေ့ရမ်းပြီး နန့်လေ့ရှိပြီး ထစ်ခါတရံမှာ ပါးစပ်ကိုဟထားတတ်သလို တအီအီအသံလည်း ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ခွေးဟာ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ အနေအထားထက်ပိုပြီး ခင်မင်ဖော်ရွေတဲ့ အမူအယာရှိပြီး စိုးရိမ်ကြောင့်ကြဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာမျိုး လုံးဝတွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါ။
ပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေတဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအယာ ရှိပါတယ်။ နားရွက်တွေကို ထောင်မတ်ထားပြီး၊ မျက်လုံးတွေ အရောင်တလက်လက်ထွက်နေပြီး အမြီးကိုလည်း တနန့်နန့် လုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မြူးထူးပြီး ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားနေလေ့ ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရှေ့လက်တွေကို စန့်ထားပြီး ဦးခေါင်းကို ရှေ့ထုတ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းကို လေထဲမှာမြှောက်ထားရုံသာမက တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရမ်းခါနေတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီအမူအယာကိုတွေ့ရရင်တော့ ခွေးဟာ ခုန်ပေါက်ဆော့ကစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို ပြနေပါပြီ။
အရှုံးပေးပြီး နာခံလိုက်နာဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ
ခေါင်းကိုအောက်စိုက်၊ နားရွက်ကို နောက်ပစ်ထားပြီး မျက်လုံးတွေက အဝေးကိုကြည့်နေပါလိမ့်မယ်။ အမြီးကိုနှိမ့်ထားပြီး အနည်းငယ်ဝှေ့ရမ်းနေတတ်ပေမယ့် ကွေးထားခြင်းမရှိပါ။ ပက်လက်လှန်ပြီး ဗိုက်သားတွေကို ဖော်ပြနေတတ်ပါတယ်။ အမိန့်နာခံလိုက်နာတော့မယ့် ခွေးတစ်ကောင်ဟာ တခြားခွေး(သို့) လူကို တရှုံ့ရှုံ့နမ်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လျှာနဲ့လျက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူဟာနာခံလိုက်နာဖို့ အသင့်ရှိကြောင်း ပြသလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ မြေကြီးကို တရှုံ့ရှုံ့နမ်းပြီး သူဟာ ပြဿနာလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်းပြသလေ့ရှိပါသေးတယ်။ နာခံလိုက်နာဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ သိမ်မွေ့တဲ့ အမူအယာရှိပြီး ရန်လိုခြိမ်းခြောက်တဲ့ အမူအယာ လုံးဝမရှိပါ။
စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအယာဟာ
အမိန့်နာခံဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်နဲ့ တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ နားရွက်တွေကို နောက်ပစ်ထားတတ်ပြီး လည်ပင်းကိုလည်း ဆန့်ထုတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်း မသက်မသာဖြစ်နေလေ့ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ အနည်းငယ်တုန်တုန်ယင်ယင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ မကြာခဏဆိုသလို တအီအီအသံပေးတာ၊ ညည်းတွားတာ၊ သန်းဝေတာတွေ လုပ်လေ့ရှိပြီး နှုတ်ခမ်းကိုလည်း လျှာနဲ့လျက်လေ့ရှိပါတယ်။ အမြီးကို နှိမ့်ထားလေ့ရှိပြီး ခြေထောက်တွေကြားမှာညှပ်ပြီး ၀ှက်ထားတတ်ပါသေးတယ်။ မျက်လုံးက မျက်ဖြူသားတွေပါ တစ်ခါတစ်ရံပေါ်နေတတ်ပြီး အဲဒီအခြေအနေကို ဝေလငါးမျက်လုံး whale eye လို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ စိုးရိမ်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကို လွန်လွန်ကဲကဲ တုံ့ပြန်လေ့ရှိပြီး ပိုပြီးတော့ အကြောက်လွန်သွားတတ်သလို ပိုပြီးတော့လည်း ရန်လိုတဲ့ပုံ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအနေအထားမျိုးမှာ ခွေးကို ဂရုစိုက်ပြီး သူအာရုံစိုက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ အရာကနေ ပိုပြီးသာယာတဲ့အရာတစ်ခု စိတ်သက်သာရာရမယ့် အရာတစ်ခုက်ု အာရုံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွေးကို ပိုထိတ်လန့်အောင် မလုပ်မိဖို့နဲ့ စိတ်သက်သာရာရအောင် ဖြေလျှော့ပေးဖို့ ဦးစားပေး ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
အရှုံးပေးခြင်းနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း လက္ခဏာ နှစ်ရပ်လုံး တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့အပြင် ပိုပြီးပြင်းထန်ထင်ရှားတဲ့ သွင်ပြင်တွေလည်း တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ ခွေးဟာ မြေကြီးနဲ့ကပ်လို့ တောင့်တောင့်ကြီးရပ်နေတတ်ပါတယ်။ နားရွက်တွေကို နောက်မှာပြားကပ်ထားပြီး မျက်လုံးတွေမှေးထားတတ်ပါသေးတယ်။ အမြီးကို ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားမှာ ချထားပြီး စည်းချက်ညီညီ တုန်လှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ကြောက်လန့််နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ ရံဖန်ရံခါဆိုသလို တအီအီညည်းလေ့ရှိသလို ဟိန်းလေ့ဟောင်လေ့ရှိယုံသာမက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ သွားတွေကိုလည်း ဖြဲပြတတ်ပါသေးတယ်။ ခွေးဟာ ကြောက်လွန်းမကကြောက်ရင် ဆီးသွားရုံသာမက ၀မ်းတွေလည်း သွားတတ်ပါသေးတယ်။ ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ သူ့ကို ရန်ပြုတော့မယ်လို့ထင်လာရင် ပြန်ပြီးရန်ပြုဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ထားတတ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ကို ခြောက်လှန့်မယ့်အစား အဝေးကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ရှောင်ထွက်သွားလိုက်တာဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ခွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ယုံကြည်မှုရှိပြီး ရဲဝံ့ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွေးကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ကြိုးစားမပေးသင့်သလို အပြစ်ပေးတာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါ။ ခွေးကို ခြိမ်းခြောက်မှုကင်းတဲ့၊ သူကြောက်နေတဲ့ အရာနဲ့ဝေးပြီး သူနဲ့အကျွမ်းတ၀င်ရှိပြီးသားနေရာကို ရွှေ့ပြောင်းပေးတာဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
အင်အားကြီးမားပြီး လွှမ်းမိုးလိုတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ
သူဟာအခြားခွေးပဲဖြစ်ဖြစ် လူအပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် လွှမ်းမိုးခြိမ်းခြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သေချာအောင်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ခွေးဟာ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ မြင့်မြင့်မားမားရပ်လေ့ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရှေ့ကိုခပ်ကိုင်းကိုင်းထားပြီး ရပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ခွေးရဲ့မျက်လုံးတွေဟာ ပြူးကျယ်နေပြီး အခြားခွေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူကိုပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံးချင်းဆုံပြီး ခပ်ရဲရဲ ကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။ နားတွေကိုစွင့်ထားတတ်ပြီး အမြဲအသင့်အနေအထားမှာ ရှိနေသလို ကျောပေါ်က အမွေးတွေလည်း ထောင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အသံတိုးတိုးနဲ့ ဟိန်းဟောင်ညည်းတွားလေ့ ရှိပါတယ်။ ခွေးရဲ့အမူအယာဟာ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှု နည်းပါးပြီး ရန်လိုခြိမ်းခြောက်တဲ့ပုံ ပေါ်နေလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအမူအယာမျိုးကို အရှုံးပေးထားတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်အပေါ်မှာ ပြရင်တော့ ပြဿနာသိပ်မရှိပါ။ လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခြားခွေးတစ်ကောင်အပေါ်မှာ ပြမိရင်တော့ တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့ သေချာနေပါတယ်။ လူတွေအပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ကတော့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီလို ခွေးမျိုးနဲ့ မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့်မယ့်အစား အဝေးကို အသာတကြည် ရှောင်ထွက်သွားတာပဲ ပိုကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ခွေးမှာ လူတွေကို အဲဒီလိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားတတ်တဲ့ အပြုအမူမျိုးရှိနေရင်တော့ အပြုအမူကို စံနစ်တကျ သရုပ်ခွဲလေ့လာဖို့ လိုနေပါပြီ။
ရန်လိုနေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ အပြုအမူဟာ
လွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ အပြုအမူထက်ပိုပါတယ်။ ခွေးဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သက်သေပြချင်တဲ့ အနေနဲ့ ခြေချောင်းအားလုံးကို မြေကြီးပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ခြေကုပ်ယူပြီး ရပ်နေလေ့ရှိပြီး ရှေ့ကိုပြေးထွက်လာဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ နားရွက်တွေကို နောက်မှာစန့်နေအောင် ထောင်ထားပြီး ခေါင်းကိုလည်း ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းဖြစ်အောင် ထားလေ့ရှိပါတယ်။ မျက်လုံးတွေကို မှေးထားပေမယ့် စူးရှတောက်ပနေလေ့ ရှိပါတယ်။ အမြီးကို ဖြောင့်တန်းနေအောင် မြင့်မြင့်မြှောက်ထားပြီး ရှေ့နောက် ဝှေ့ရမ်းနေတတ်ပါသေးတယ်။ သွားဖြဲထားရုံသာမက မေးရိုးတွေကို အသံမြည်အောင်ကြိတ်နေတတ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်သံအပြည့်နဲ့ ဟိန်းလေ့ဟောင်လေ့ ရှိပါတယ်။ ကျောပေါ်က အမွေးတွေကိုလည်း ထောင်ထားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လက္ခဏာမျိုးရှိနေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်အနားကို ရောက်သွားခဲ့ရင်တော့ အဝေးကို ဂရုတစိုက်နဲ့ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ခွေးမှာ ရန်လိုတဲ့လက္ခဏာတွေ တွေ့နေရရင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ခွေးလေ့ကျင့်ရေးဆရာနဲ့ တွေ့ဆုံပေးပြီး ကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကို သင်ကြားပေးဖို့ စီစဉ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးတာက ရန်လိုနေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ကို အိမ်မွေးအဖြစ် မမွေးမိဖို့ပါပဲ။
လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်ပါ။ သူတို့ဟာ သခင်တွေအပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ကြပါ။
ရိုးသားဖြူစင်မှု အရှိဆုံး သတ္တ၀ါကောင်းလေးတွေဖြစ်တာမို့ ကိုယ်ကတော့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှတဲ့ တချို့သောလူတွေအစား ခွေးကလေးတွေနဲ့ပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စကားပြောနေချင်ပါသေးရဲ့. . .
The fearful dog combines submissive and anxious attitudes with more extreme signals. She stands tense, but is very low to the ground. Her ears are flat back and her eyes are narrowed and averted. Her tail is between her legs and she typically trembles. A fearful dog often whines or growls and might even bear her teeth in defense. She may also urinate or defecate. A fearful dog can turn aggressive quickly if she sensesathreat. Do not try to reassure the anxious dog, but remove yourself from the situation calmly. If you are the owner, be confident and strong, but do not comfort or punish your dog. Try to move her toaless threatening, more familiar location.
An aggressive dog goes far beyond dominant. All feet are firmly planted on the ground inaterritorial manner, and she may lunge forward. Her ears are pinned back, head is straight ahead, and eyes are narrowed but piercing. Her tail is straight, held up high, and may even be wagging. She bears her teeth, snaps her jaw and growls or barks threateningly. The hairs along her back stand on edge. If you are nearadog showing these signs it is very important to get away carefully. Do not run. Do not make eye contact with the dog. Do not show fear. Slowly back away to safety. If your own dog becomes aggressive, seek the assistance ofaprofessional dog trainer to learn the proper way to correct the behavior. Dogs with aggressive behavior should never be used for breeding.
Posted by Han Kyi at 10:25:00 pm 1 comment:
အမျိုးအစား : ရှာရှာဖွေဖွေ, ခွေးကလေးတွေ
Posted by Han Kyi at 10:00:00 am No comments:
ကြည့်သူတွေကို ရင်ရှုပ်အောင်လုပ်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသကား၊ စစ်ကား၊ အချစ်ကား၊ စုံထောက်ကား၊ လျှို့ဝှက်သည်းဖိုကားစသည်ဖြင့် ဇာတ်လမ်းပေါင်းကလည်း စုံတကာစေ့လို့ နေပါတယ်။ ဇာတ်ကားအများစုကတော့ နံမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အားဖြည့်ပြီး ဇာတ်အိမ်ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါမှလည်း ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါပေမယ့် နံမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေ သိပ်မပါဘဲ ပရိသတ်ကြိုက်အောင် ရိုက်နိုင်တဲ့ဇာတ်ကားအမျိုးအစားကတော့ ထိတ်လန့်သည်းဖို ခပ်လွယ်လွယ်ခေါ်ရရင်တော့ သရဲကားတွေဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာမတိုးတက်ခင် တိပ်သားခေတ်တုန်းကတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကြည့်ဖို့အရေး အတော့်ကို ၀ါယမစိုက်ရပါတယ်။ ကားကောင်းဖြစ်ပေမယ့် အိမ်မှာဝယ်ထားနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါ။ ဗီစီဒီခေတ်ရောက်လာတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ အတော်အဆင်ပြေလာပါတယ်။ အခုခေတ်လို နည်းပညာရေစီးကြောင်း အရှိန်ကောင်းနေချိန်မှာတော့ ရုပ်ရှင်ကြိုက်သူတွေအတွက် အင်မတန်မှ အဆင်ပြေလှပါတယ်။
ကိုယ်တို့နိုင်ငံမှာတော့ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကလည်း အသက်မ၀င်သေးတာကြောင့် ဇာတ်ကားပေါင်း၂၀လောက်ပါတဲ့ ဒီဗီဒီတစ်ခွေကိုမှ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်ပဲပေးရတာဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ကြိုက်တဲ့ ၀ါသနာအိုးတွေအတွက် အချိုရှာသကာတင်မကာပဲ ပျားရည်အိုးပါတွေ့လို့နေပါရဲ့။ အဲဒီခွေဆိုင်တွေမှာကြည့်ရင် အရောင်းရဆုံးဇာတ်ကားခွေတွေထဲမှာ သရဲကားခွေတွေ ပါနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ယိုးဒယားသရဲကား၊ အင်ဒိုသရဲကားတွေအပြင် တလောဆီက မြန်မာသရဲကားတွေပါ ထွက်လာပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာသရဲကားကတော့ မိတ်ကပ်အဖွေးသားနဲ့ အင်္ကျိအဖြူကြီးတွေဝတ်ပြီး သရဲပုံဖမ်းထားပေမယ့်
အလင်းအမှောင်နဲ့ ကင်မရာအယူအဆတွေလိုနေသေးတာကြောင့် ကြောက်ရမယ့်အစား ရယ်စရာပိုကောင်းပါသေးတယ်။ ဒါတောင်မှ အဲဒီမြန်မာသရဲကားတွေကြည့်ပြီး သွေးလန့်တဲ့လူကလန့်ကြသေးတာမို့ အခုတော့လည်း မြန်မာသရဲကားတွေ မရိုက်ရတော့တာမို့ မျက်စိနောက်တော့ တော်တော်သက်သာသွားပါပြီ။
အနောက်တိုင်းသားတွေကတော့ ဘာမဆိုမှတ်မှတ်သားသားရှိကြတာကြောင့် သမိုင်းတစ်လျှောက် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့ ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကားတွေထဲကမှ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပေါင်း ၁၀ကားကို အောက်ပါအတိုင်း အစီအစဉ်တကျ တင်ပြထားပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ William Friedkin က စာရေးဆရာ William Peter Blatty ရဲ့ဝထ္ထုကို အသက်သွင်းခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်စရာရသ အမြောက်ဆုံးဇာတ်ကားအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးဟာ သရုပ်ပီပြင်ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းရဲ့အရှိန်ကို ကျမသွားအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကားဟောင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကားသစ်မှာတော့ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကို ပိုပြီးပီပြင်အောင် ပြန်လည်ပြုပြင်ထားပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် ဖြစ်စဉ်ကို အခြေတည်ပြီး ရိုက်ကူးထားခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့် သမိုင်းတလျှောက် ထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ငြင်းချက်ထုတ်စရာမလိုလောက်အောင် ထင်ရှားလှပါတယ်။
ဇာတ်ဆောင်က အပေါ်ထပ်စကြံင်္ကနေ သရဲတွေစောင့်နေကြတဲ့ အိပ်ခန်းဆီကို လျှောက်လာတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း
၁၉၉၉မှာ အသစ်ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ စိတ်ပျက်စရာဇာတ်ကားကို မဆိုလိုပါ။ ၁၉၆၆မှာ ဒါရိုက်တာ Robert Wise ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မူရင်းဇာတ်ကားကိုသာ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ပဲ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ သရဲခြောက်တယ်လို့ နံမည်ကြီးလှတဲ့ စံအိမ်ကြီးမှာ အခြားလူတွေနဲ့အတူ တစ်ညတာနေခဲ့ရတဲ့ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး မတည်မငြိမ်ရှိလွန်းလှတဲ့ Eleanor အဖြစ် Julie Harris က အပီပြင်ဆုံး သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေက ပထမတန်းစားတွေမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ထိတ်လန့်စရာကောင်းအောင်တော့ ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းခဲ့ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်က Eleanor အခန်းတံခါးကို လာခေါက်နေတာကြောင့် အခန်းဖော်ဖြစ်တဲ့ Theo ကို သူမရဲ့လက်ကို ဖျစ်ညှစ်နေတာကို ရပ်ဖို့ပြောခဲ့ပေမယ့် Theo က အခန်းအပြင်ကို ထွက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
Jacob Singer အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့Tim Robbins ဟာ ဗီယက်နမ်စစ်ပြန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ထိတ်လန့်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ စစ်ပွဲရဲ့အနိဌာရုံတွေကြောင့် စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်တပ်ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်တွေကြောင့်လား၊ Jacob Singer ရဲ့ တကယ့်စိတ်ဝေဒနာကြောင့်လား၊ အခြားသော အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်လား သေသေချာချာ မသိနိုင်ပါ။ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို နေရာတကာမှာ တွေ့မြင်နေရပြီး Jacob Singer တစ်ယောက် ဘယ်သူ့ကို ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာ မဝေခွဲနိုင်တော့ပါ။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ပရိသတ်တွေကို Jacob Singer ရဲ့အိပ်မက်တွေထဲကို ဆွဲဆောင်ခေါ်ယူသွားခဲ့ပြီး ဘယ်အရာက တကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဝေခွဲရခက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းပါတယ်။
Jacob Singer ဟာ ရထားပေါ်က ဆင်းကာနီးအချိန်မှာ ရထားပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ တကယ့်ခရီးသည်တစ်ဦးကို ကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါ ကွေးကောက်နေတဲ့ အမြီးတစ်ချောင်းဟာ အဲဒီလူရဲ့အောက်ကနေ ထွက်နေတာကို တွေ့ရပါတော့တယ်။
ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့သမျှရုပ်ရှင်တွေထဲက အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို အမေရိကန် ကျေးလက်ဒေသရဲ့ လုံခြုံအေးချမ်းမှုနဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့မိသားစုတစ်ခုရဲ့ ဘ၀ပုံစံနဲ့ အစချီထားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ဖြစ်လာပုံနဲ့ သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းဆင်ထားပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ မိသားစုနေထိုင်ကြတဲ့ ကျေးလက်အိမ်ကလေးတစ်အိမ်မှာ ထူးဆန်းပြီး ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ၅နှစ်သမီးလေး ပျောက်ဆုံးသွားရာကစလို့ ထိတ်လန့်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ခေါ်ယူပြီး စစ်ဆေးခိုင်းခဲ့ပေမယ့် ထူးဆန်းလှတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာအဖြေမှ ထုတ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။
ကလေးပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘသာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ စိတ်ပညာရှင်က သူမပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်များစွာက ၀န်းရံနေကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားရင်း “သူမဟာ ကိုယ်တိုင်အတွက်တော့ သာမန်ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်တော့ မကောင်းဆိုးဝါး တစ်ကောင်သာဖြစ်ပါတယ်”ဆိုတဲ့ ထိတ်လန့်စရာ မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသက်၉နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ Cole Sear အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Haley Joel Osment ဟာ ကြောက်လန့်စရာကောင်းပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ မြင်ကွင်းတွေကို စိတ်အာရုံထဲမှာ အမြဲမြင်နေရပြီး သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလည်း ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကလေးဟာ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်မရှိတဲ့ လူသေအလောင်းတွေကို နေရာအနှံ့မြင်နေသလို ထင်ယောင်ထင်မှားတွေဖြစ်လာတာကြောင့် စိတ်ပညာရှင် Malcolm Crowe (Bruce Willis) နဲ့တွေ့ပြီး အကြံညာဏ်တောင်းရပါတော့တယ်။ ဒါရိုက်တာ M. Night ဟာ ဒီဇာတ်လမ်းကို ခေတ်ဟောင်းက ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကား Twilight Zone နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကိုတော့ လိုတာထက်ပိုမသုံးဖြစ်အောင် အတော်ဂရုစိုက်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး ထင်မှတ်မှတ်မထားတဲ့ အံ့သြစရာအဆုံးသတ်မျိုးနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို သိမ်းထားပါတယ်။
Cole က အခန်းအလယ်မှာ အကာအကွယ်တွေနဲ့ စီရင်ထားတဲ့ ရွက်ဖျင်တဲတစ်ခုထိုးထားခဲ့ပေမယ့် တဲဆီကိုသူလျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ တဲထဲမှာ မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ၀ိညာဉ်ကသူ့ကို စောင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
၁၉၆၈မှာ ဒါရိုက်တာ Roman Polanski ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေး၊ သရုပ်ဆောင် Mia Farrow ရဲ့ ကယောင်ခြောက်ခြားနဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှု၊ Dakota အဆောက်အဦ၊ ကြောင်တောင်တောင်နိုင်ပြီး ဟာသမြောက်လှတဲ့ Ruth Gordon ရဲ့ ဇာတ်ဆောင်စရိုက်၊ တစ်ခန်းလုံးပြည့်နေတဲ့ စေတန်မာန်နတ်ကိုးကွယ်သူ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေစတဲ့ စံချိန်မီရိုက်ချက်တွေနဲ့ ဒီနေ့အထိတန်းဝင်ဇာတ်ကား ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Rosemary (Farrow) ဟာ ဘာတစ်ခုမှ နားမလည်ခဲ့ရဘဲ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ရဲ့ မိခင်အဖြစ် New York အခြေစိုက် ပညာသည်အဖွဲ့အစည်းကနေ ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ သူမဟာ စဉ်းစားလို့တောင်မရနိုင်တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ရဲ့မိခင်အဖြစ်ကို တကယ်ရောက်နေပြီလားဆိုတဲ့ သံသယတွေဝင်လာပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူမကို ယုံကြည်မဲ့သူမရှိပါ။
Rosemary ရဲ့ ကြောက်စရာ အိပ်မက်တွေ။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သူနေရာမှာ လူကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ပထမဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Damien လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကလေးဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးရဲ့ ကလေးအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ကလေးဟာ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ သွေးအေးရက်စက်မှုမျိုးတွေရှိသလို သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က အလုပ်သမားတွေ၊လူတွေဟာ သူ့ကိုယုံကြည် ကိုးကွယ်ကြပြီး၊ သူ့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် ဘာမဆို စွန့်လွှတ်ကြ၊ လုပ်ကြပါတော့တယ်။
Damien ရဲ့မွေးနေ့ပါတီပွဲမှာ သူ့ရဲ့အထိန်းတော်အမျိုးသမီးဟာ သူ့ကိုသစ္စာရှိမှုကို သက်သေပြဖို့ ခေါင်မိုးကနေ ကြိုးဆွဲချပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။
Henry James ရဲ့The Turn of the Screw ၀ထ္ထုကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ပရိသတ်ကို ၀ိတိုရိယခေတ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ထိတ်လန့်စရာ ၀ိညာဉ်လောကထဲကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ မိဘမဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ငှားရမ်းခံရတဲ့ အထိန်းတော်အမျိုးသမီးအဖြစ် Deborah Kerr က သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ သူ့အိမ်လေးဟာ ကလေးနှစ်ယောက် ရောက်လာချိန်ကစလို့ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့အတူ ထိတ်လန့်စရာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ သူမဟာ ၀ိညာဉ်တွေကို မြင်လာရပြီး အိမ်ရဲ့အတိတ်ကလျှို့ဝှက်ချက်တွေဟာ ပစ္စုပ္ပန်ကာလနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်အပေါ်မှာ ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေ သက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုပါ နားလည်လာပါတော့တယ်။
၁၉၈၈ခုနှစ်မှာ ပြန်ရိုက်ခဲ့တဲ့ စိတ်ပျက်စရာဇာတ်ကားကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၁၉၆၀မှာ ဒါရိုက်တာ Alfred Hitchcock ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ထိတ်လန့်စရာ အဖြူ၊အမည်း ရုပ်ရှင်ကားကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက သရုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ ရိုက်ချက်တွေ၊ ဓာတ်ပုံပညာအယူအဆတွေဟာ တကယ့်ပထမတန်းစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Norman Bates အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့Anthony Perkins ရဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြောင်မြောက်လွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်လည်း ဒီနေ့အထိ မပေါ်ပေါက်သေးပါ။ ဟာ အစစအရာရာ ရှားပါးလှတဲ့ ခေတ်ဆိုးခေတ်ကြပ်ကြီးမှာ အသုံးစရိတ်အနည်းငယ်နဲ့ ဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးခဲ့ရတာကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်မှု၊ တင်ဆက်မှုကလွဲပြီး အခြားသော အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကို ဘာတစ်ခုမှ အသုံးမပြုနိုင်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားဟာ ဇာတ်ကားအဖွင့်စာတမ်းကအစ Bernard Herrmann ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုအဆုံး မေ့ပျောက်လို့မရနိုင်အောင် ထူးခြားပြောင်မြောက်လှတဲ့ကားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ရေချိုးတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းလို့ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ဝင်ခန်းဟာ Norman Bates က ရုပ်လုံးသွင်းထားတဲ့ငှက်ရုပ်တွေကြားမှာ Marion Crane (Janet Leigh) ကို တုန်တုန်လှုပ်လှုပ်နဲ့ စကားပြောနေတဲ့ အခန်းဖြစ်ပါတယ်။
Stanley Kubrick ဟာ Stephen King ရဲ့ဝထ္ထုကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းချင်ခဲ့တာဟာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုပြည့်မြောက်ရုံအတွက်သာမက သွေးလန့်၊ ကြောက်ရွံ့ပြီး မမေ့နိုင်စရာကောင်းလှတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုတွေကို ဝေမျှလိုတဲ့ ဆန္ဒလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို စကြည့်ချိန်မှာတော့ သရုပ်ဆောင် Jack Nicholson ဟာ လူတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိလွန်းတဲ့ ဌာနတစ်ခုက လက်ရဲဇက်ရဲနိုင်လွန်းတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်း သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကိုဆက်ကြည့်နေရင်းက ပရိသတ်ရဲ့ အာရုံကြောတွေ၊ အရေပြားတွေထဲကိုအထိ စိမ့်ဝင်သွားစေမယ့် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာတွေကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေဟာ သဘာဝကျလွန်းပြီး ကြောချမ်းစရာကောင်းလှသလို Shelly Duvall ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုကလည်း သွေးလန့်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြောင်မြောက်လွန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားဟာ တစ်ခါပြီးတစ်ခါ ထပ်ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ သံသယဖြစ်ဖို့မလိုပါ။
စကြံင်္လမ်းမှာနေတဲ့ သေးသေးသွယ်သွယ် အမွှာညီအစ်မရဲ့ ၀ိညာဉ်တွေ။
အထက်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို အကုန်တော့မကြည့်ဖူးပေမယ့် တ၀က်ကျော်လောက်ကိုတော့ ကြည့်ဖူးပါတယ်။ တကယ့်ကိုပဲ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ပီပြင်တဲ့ဘယာနကရသကို ခံစားရတာတော့ တကယ်သေချာလှပါတယ်။
Posted by Han Kyi at 4:02:00 am No comments: